၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပညာရှိတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာစဉ် လမ်းမပေါ်မှာ ဒင်္ဂါးပြားတစ်ခုကို သတိပြုမိခဲ့တယ်။ သူကောက်ယူလိုက်ပေမယ့် သူ့ဘ၀မှာ ကျေနပ်လွန်းလို့ ဒီဒင်္ဂါးပြားကို သုံးစရာမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ လိုအပ်တဲ့သူတွေဆီ လှူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့လုံး လမ်းတွေပတ်လျှောက်ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။...
နေရာ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဟိုးတစ်နေ့က ကျွန်မတို့ကားအပြင်မှာ ပိတ်ပြီး လုပ်ငန်းသုံး လိုက်ထရပ်ကားတစ်စီးက လမ်းဘေးမှာ နှစ်ထပ်ရပ်ထားပါတယ်။ တစ်နေ့ကလည်း အဲဒီလိုပဲ နှစ်ထပ်လာရပ်ထားပြန်ရော . . သူ့ကားကို ရှောင်ပြီး မနည်းထွက်ရပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ အဲဒီနေရာမဟုတ်ဘဲ ရှေ့ဘက်မှာ...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရှေးရှေးတုန်းက ကြယ်တွေကိုကြည့်ပြီး အနာဂတ်ကို ဖတ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရှိပါသတဲ့။ သူက ညညဆိုရင် ကြယ်တွေကို ငေးကြည့်ပြီး အချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဗေဒင်ဆရာလို့ ဆိုတယ်။ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတဲ့...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဦးထင်လင်းဟာ သူ့ခြံထဲက လျှို့ဝှက်နေရာ လေးတစ်ခုမှာ ရွှေတွေကို မြှုပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်။ နေ့တိုင်း အဲဒီနေရာကိုသွားပြီး သူမြှုပ်ထားတဲ့ ရွှေဒင်္ဂါးတွေကို တူးကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ရှိတာ သေချာလားဆိုပြီး တစ်ခုချင်း ရေတွက်ကြည့်တယ်။ အဲဒီလို နေ့တိုင်း...
အတုံ့အလှည့် . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက လမ်းမှာအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုပြီးတော့ ကုမ္ပဏီကိုပြန်သွားဖို့ ကားတံခါးဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကားအောက်မှာအိပ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်က ရုတ်တရက်ထွက်လာပြီး သူ့ခြေထောက်ကို လှမ်းကိုက်လိုက်ပါတယ်။ သူစိတ်တိုဒေါသထွက်သွားပြီး အနားကကျောက်ခဲနဲ့ ကောက်ပေါက်လိုက်ပေမယ့် ခွေးကိုမထိပါဘူး။ ခွေးကတော့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရုံးကိုရောက်တော့...
အောင်မြင်စေမည့် နည်းလမ်းကောင်း ၁၀ ရပ်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ (၁) ကိုယ့်အားသာချက်ကို သိနားလည်ပါ။ အဲဒီအားသာချက်အတိုင်း အသုံးချပါ။ (၂) အတိတ်ကအရှုံးအတွက် တနုံ့နုံ့ဒေါသထွက်မနေပါနဲ့။ သင်ခန်းစာယူပါ။ (၃) အိပ်မက်ကို ရဲရဲကြီးမက်ပါ။ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကို မြင့်မြင့်မားမားထားရှိပါ။ (၄) အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်စီမံကိန်းထားရှိပါ။ (၅) လွယ်လွယ်နဲ့...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်ခါတုန်းက အဘိုးအိုဦးဘဟာ သူ့အိမ်နီးချင်းမောင်ထူးက သူခိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကောလာဟလသတင်း လွှင့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့စကားကြောင့် မောင်ထူးအဖမ်းခံလိုက်ရတော့တယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ မောင်ထူးမှာ အပြစ်မရှိကြောင်း သက်သေပြနိုင်သွားခဲ့တယ်။ ဦးဘက သူ့ကို မှားယွင်းစွာ စွပ်စွဲ ပြောဆိုပါတယ်ဆိုတာ တရားရုံးမှာ...
စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နွေရာသီရဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ လူနှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်ထွက်လာကြတယ်။ လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း အင်မတန်ပူပြင်းပြီး ချွေးထွက်လာတာကြောင့် အနီးအနားက သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင်အောက်မှာ အရိပ်ခိုရင်း နားနေလိုက်ကြတယ်။ သစ်ပင်ရဲ့ သစ်ကိုင်းတွေကို မော့ကြည့်ရင်း လူတစ်ယောက်က တခြားတစ်ယောက်ကို ပြောလိုက်တယ်။...